Prototype kugadzira - Mestech Industrial Limited
Prototype kugadzira kugadzira imwe kana akati wandei sampuli zvinoenderana nechigadzirwa dhizaini yekudhirowa kana kubata, kuburikidza nedzimwe nzira dzakakosha dzekugadzirisa, zvinoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa chitarisiko uye dhizaini yekudhirowa isina kugadzirwa muforoma.
Iyo prototype ingangofanana neicho chaicho chigadzirwa muchimiro, ruvara uye chimiro. Iyo inoshandiswa kuongorora kana saizi nzvimbo yekubatanidza maficha, kutaridzika, maficha mavara uye zvimwe zvinoshanda maficha ezvichangobva kugadzirwa zvigadzirwa zvine chokwadi uye zvine musoro, kana kuratidza zvigadzirwa kune vatengi kuti vawane vatengi 'maonero kana musika kuzivikanwa.
Chigadzirwa hupenyu hwehupenyu hwakatangira kubva dhizaini uye hunopera mumusika. Chigadzirwa chigadzirwa chinotsanangura basa, kutaridzika uye kuvimbika kwezvigadzirwa. Sarudza maitiro uye mutengo wechigadzirwa. Chigadzirwa dhizaini ibasa rakaomarara, iro rinoenderana nekubudirira kwechigadzirwa chose. Kubva pane chigadzirwa dhizaini kusvika kwekupedzisira kugadzirwa kwemazhinji, chero mhando yechigadzirwa inoitirwa kugadzirwa kwakawanda inoda kuisa mari zhinji, nguva nesimba. Dhizaini yakanaka ndiyo kiyi yekubudirira kwechigadzirwa. Iyo kugadzirwa kwechigadzirwa prototype kuongorora, kuongorora uye kugadzirisa chigadzirwa dhizaini inzira yakakosha yekuwana yakakwana chigadzirwa dhizaini. Ruoko bhodhi kugadzira inogona kunyatso kuvandudza kumhanya kwechigadzirwa kukura
Zvigadzirwa zvemaindasitiri, senge zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, mota uye zvigadzirwa zvekurapa, zvakagadzirwa nepurasitiki, Hardware kana zvemagetsi zvigadzirwa. Kuti tidzivise marara akakomba muhuwandu hwekugadzira chakuvhuvhu uye kugadzirwa kunokonzerwa nekukanganisa dhizaini, isu tinogadzira masampuli emhando pamutengo mushoma kuburikidza nemashini, laser inogadzira uye yenguva pfupi muforoma uye dzimwe nzira dzekuongorora, kuungana uye kuongorora, kana kuvaratidza vatengi.
1. Manual kugadzirwa kwesimbi modhi: kune nzira nhatu huru dzekugadzira simbi chikamu modhi
(1). Sheet simbi: kukotama, kucheka, kuburitsa uye kurova neruoko kana nyore maturusi. Iyi nzira inowanzo shandiswa yemodeling kugadzirwa kwetetepa-yakakomberedzwa sheet simbi zvikamu. Zvinhu zvinoshanda zvinosanganisira simbi, aruminiyamu chiwanikwa, mhangura chiwanikwa uye zinc chiwanikwa.
(2) CNC machine: azvikuya, wekushanduka, kukuya, zvaikosha uye kuchera simbi zvinhu pamusoro muchina maturusi. Iyi nzira inoshandiswa kugadzirwa kwe block uye shaft zvikamu mamodheru, dzimwe nguva maburi kana kupedzisa kwemuno kwemashizha esimbi mamodheru anodawo kugadzirwa. Zvinhu zvinoshanda zvinosanganisira simbi, aruminiyamu chiwanikwa, mhangura chiwanikwa uye zinc chiwanikwa.
(3). Metal laser 3D kudhinda (sintering): Metal 3D kudhinda inoshandiswa kugadzira zvikamu zvine yakaoma maumbirwo uye zvivakwa zvinonetsa kugadzirwa nemachina uye jira simbi kugadzirisa, senge injini mashizha, chakuvhuvhu kutonhora mapaipi emvura, nezvimwe zvinoshanda zvinhu zvinosanganisira chishandiso simbi uye martensitic simbi, isina simbi yakachena titanium uye titanium chiwanikwa, aruminiyamu chiwanikwa, nickel base chiwanikwa, cobalt chromium chiwanikwa uye mhangura base alloy
2. Zviratidzo zvepurasitiki: pane nzira nhatu huru dzekugadzira epurasitiki prototypes:
(1) .CNC michina: ndiko kuti, epurasitiki isina chinhu yakavezwa pamushini chishandiso. Iyi nzira inoshandiswa kugadzira ganda, block uye kutenderera muviri. Inoshanda kune ingangoita ese akaomarara epurasitiki zvinhu.
(2). Laser 3D kudhinda uye sintering (SLA uye SLS): SLA inoshandiswa kugadzira iyo prototype yezvikamu zvakaoma neyakaoma CNC chitarisiko uye chimiro, kunyanya vachishandisa ABS nePV zvinhu zvinonzi photosensitive resin. SLS laser yekuumba inokodzerawo TPU mapurasitiki akapfava ayo asingakwanise kugadziriswa neCNC, uye mapurasitiki einjiniya akadai senylon.
(3) .Small batch inokurumidza kudzokorora nesilica gel chakuvhuvhu (kusanganisira yekuzadza yekuzadza uye rim): maitiro aya anotora iyo modhi inogadziriswa neCNC kana yakadhindwa ne laser 3D seyakadzika, inodurura imwe nhamba yesilica gel muforoma, uyezve inopinza iyo mvura yepurasitiki mune iyo silika gel mold mhango. Mushure mekurapa, cheka iyo silica gel muforoma kuti uwane epurasitiki zvikamu. Zvishandiso zvinoshandiswa kugadzira zvikamu iABS, PU, ​​PC, nylon, POM uye yakapfava PVC
3. Prototype kugadzirwa kwesilica gel zvikamu:
Silica gel zvinhu zvakapfava uye kupisa kwaro kunonyunguduka kwepasi uye kwakapfava, saka CNC kana laser 3D kudhinda hakuwanzo kuwanikwa. Huru nzira kuti silicone kumumvuri vari Vacuum muforoma uye nyore chakuvhuvhu aumba.
Zviratidzo zvatakaitira vatengi vedu zvinotevera:
Sheet simbi prototypes
Silicone prototypes neyajekesa muforoma
CNC epurasitiki prototypes
Laser 3D yekudhinda prototypes
Zviratidzo zvepurasitiki nekuzadza kwekuzadza
Silicone prototypes neyakareruka muforoma inoumba
Surface kurapwa kweprototype
Kusanganisira kudhinda kwe3DD, kugadzira kweCCC, kumeso kwepamusoro, kupenda uye silika skrini yekudhinda yeepombi replica repurasitiki chikamu modhi.
Kusanganisira simbi zvikamu, aruminiyamu chiwanikwa, zinc chiwanikwa, isina simbi zvikamu prototype kugadzirwa uye kupenda, electroplating, oxidation, PVD uye kumwe kurapwa kurapwa.
Mestech ine timu yemainjiniya ayo anogadzira dhizaini yezvigadzirwa, achipa mabhizinesi madiki uye epakati nepakati uye vatengi vane-yekumira masevhisi ekugadzirwa kwechigadzirwa, chigadzirwa chigadzirwa, kugadzirwa kwepurasitiki nesimbi kugadzirwa, chikamu kugadzirwa kwakawanda uye kutengwa kwekutenga.